Wild West dia vaovao rehetra petra-bola maimaim-poana tsy spins slot lalao izay mitondra ho an'ny mpilalao ny mahafinaritra ny andrefana sy mampiseho ny marika isan-karazany mampiseho ny ain'ny Cowboy. Amin'ny tena tsara-tsary, misy lafiny ho an'ny mpilalao mendrika ny mankafy izany petra-bola maimaim-poana tsy spins slot lalao an-tserasera. Aoka ianao ho ampahany amin'ny Saloon sy mandeha avy amin'ny fomba amin'ny Coinfalls Casino. Ny sary 3D toy ny karatra, kiraro, poti, saloon, sy ny maro hafa eto mba hitondra valisoa mahafinaritra ho an'ny mpilalao.
Amin'ny hanitra feonkira eo aoriana, ny mpilalao dia antoka ho naka an-tany hafa miaraka amin'ny West mahatonga azy ireo hiaina ny fiainana ny Cowboy. Misy endri-tsoratra hafa izay nasongadina ao ity petra-bola maimaim-poana tsy spins slot lalao an-tserasera, ary ny mpilalao Azo antoka fa hanana ny gameplay fa slot tolotra. Ity lalao slot no iray amin'ireo miavaka indrindra slots izay novolavolaina hitandrina mpilalao voly ary manome avo Fandresena.
More amin'ny developer ny Wild West
Wild West slot no novolavolaina ny Nextgen Gaming izay iray amin'ireo lalao itokisana mpandraharaha eto amin'izao tontolo izao ny lalao. Zavatra tsy mahazatra Cowboy-nanana lohahevitra petra-bola maimaim-poana tsy spins slot no tsara vita ny Nextgen Gaming. Izy ireo hampifandanjana ny famoronana sy ny rafitra ary mamorona ny tsara indrindra ho an'ny mpilalao toetra slots mba po in.
Misy 5 reels ary 10 payline in ity petra-bola maimaim-poana tsy spins slot lalao, ny vola madinika isan-karazany avy amin'ny habe 0.01-2.00 ary ny mpilalao mila mametraka ny Bet alohan'ny nihodidina ny reels ity slot. Izany dia nankany andrefana anatin'ny Cowboys amin'ny mampientam-po io lalao slot vaovao. Izany dia mahaliana slot izay manome mpilalao be ny vintana hisambotra ny mahagaga Fandresena. Ity lahatsary slot efa natao mba hanome mpilalao ny lalao nampientanentana be traikefa amin'ny rehetra namoly.
Ny tombony amin'ny manodidina ity lalao slot azo mampandeha ny Cowboy izay an'ala; izany dia afaka soloina hafa ihany koa ny sary famantarana ny hamita ny mandresy tsikombakomba. Ny Poker poti mampihetsika ny maimaim-poana spins manodidina sy ny Fandresena dia hahazo ny tosika ny samy hafa multipliers fa io kilalao slot efa nampanan-karena amin'ny. Raha ny Cowboy hita nandritra ny tombony manodidina, dia mpilalao dia hovaliana soa amin'ny fanampiny spins.
Wild West dia miavaka maso slot izay efa nampanan-karena amin'ny endri-javatra mahafa-po mba hanome mpilalao mampientam-po ny sasany ny fotoana. Mandehana mialoha ary miezaka ny vintana amin'ny reels ity slot ary aoka fotoana tsara manomboka amin'ny Coinfalls Casino.